के लेखेको छ तपाईंको भाग्यमा आजको राशिफलमा ? – Pahilo Page
के लेखेको छ तपाईंको भाग्यमा आजको राशिफलमा ?
५ चैत्र २०७५, मंगलवार १०:४७ 555 पटक हेरिएको
खर्च लागे पनि रोकिएका काम सम्पादन हुनेछ। मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौडसमेत जिताउन सक्छ। फाइदा नगण्य उठे पनि स्वाभिमानको रक्षा गर्न सफल भइनेछ। द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। दिगो आम्दानी हुने काम फेला पर्नेछ। बलजफ्तीले हानि पुर्याउनेछ भने फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइ टाढिनेछन्। तापनि पुरुषार्थद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। (नेपाली पात्रो)